कहाँबाट छिर्यो बालुवाटारमा कोराना - Nepal Samaj
कहाँबाट छिर्यो बालुवाटारमा कोराना
१८ असोज, २०७७नेपाल समाजराजनीति
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सल्लाहकार, चालक र पाँच दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना भाइस (कोभिड–१९)को संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालको राजनीतिकवृत्तमा समेत ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तुरुन्त बाह्य भेटघाटका कार्यक्रमहरु बन्द पारे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय बैठक पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भयो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, पार्टी एकताका बाँकी काम र अधिवेशनका बारेमा दास्रो तहका नेतादेखि कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले अध्यक्षद्वयले कस्तो निर्णय गर्नेछन् भनेर व्यग्रताका साथ पर्खिरहेका दिन लम्बिएका छन् ।
महत्वपूर्ण सल्लाहकारहरु बालुवाटार छिर्ने वातावरण नभएपछि प्रधानमन्त्रीको दैनिक प्रशासनमा पनि यसले पक्कै असर पारिरहेको हुनुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुककै सामान्य जनजीवन ठप्पप्रायः रहेको अवस्थामा राजनीतिक घटनाक्रममा एक्कासी ब्रेक लागेको छ । सामान्य जनजीवन, राजनीति र प्रशासनसमेतमा ब्रेक लाग्नको एउटै कारण हो, कोरोना भाइरसले ल्याएको महामारीको बालुवाटार प्रवेश ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवासमा नियमित पुग्ने ओलीकै निजी चिकित्सक डा. दीब्य सिंह शाहलाई सबैभन्दा पहिलो कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । एक हप्ताअघि असोज ९ गते डा. शाहको पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो । सामान्य ज्वरो, रुघा र खोकीको लक्षण देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको उनको परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार पाँच दिनपछि बालुवाटार कन्ट्र्याक ट्रेसिङ परेको थियो ।
गएको बुधबार स्वाव संकलन गरिएका प्रधानमन्त्री ओली र उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यको पीसीआर रिपार्ट नेगेटिभ आएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । यद्यपि बिहीबार र शुक्रबार बालुवाटारबाट नमूना संकलन गरिएकामध्ये प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र उनीहरुका सवारी चालक तथा प्रमुख स्वकीय सचिव ईन्द्र भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यसका साथै बालुवाटारको सुरक्षा घेरामा रहेको झण्डै पाँच दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
शिक्षण अस्पतालकी डीनसमेत रहेकी डा. शाहमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी हालसम्म पनि होम आइसोलेसनमा रहेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । उनको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा शिक्षण अस्पताल र बालुवाटारले केही बताएका छैनन् । नेपालको राजनीति र प्रशासनको केन्द्र मानिएको बालुवाटारको बारेमा सर्वसाधारणको चासोलाई मौनतामा बाध्न उपयुक्त नदेखिने विज्ञहरुको मत छ ।